Nei dzokubika To Dzidzisai Travel In Europe? | Save A Train
musha > Travel Europe > Nei dzokubika To Dzidzisai Travel In Europe?
Kutora chitima ndechimwe chezvinhu underrated siyana tasa. sezvo intercontinental ndege Vatasvi kuva inokwanisika ose gore, asi nezvitima dziri kuwedzera kwose kwose. Pane zvikonzero zvinoverengeka nei achifamba nechitima ndechimwe chezvinhu zvinonakidza nzira kuyambuka miganhu dzakawanda.
Semuyenzaniso, ari rainzwika inopiwa Bernina Express moga zvakakwana kutendeutsa chero yendege Zvokutopenga kuva njanji mupengo. Munotatamura kubva Chur uye St. Moritz mu Vakamupfekedza kumabvazuva kuSwitzerland kuchamhembe kweItaly raMwari Tirano, ari Bernina Express inonziwo zvikuru yevedza njanji rwendo munyika. rwendo urwu zvaiva dzinokwana 90 zvemakiromita. Zvinoreva 4 maawa cinematic yomumakomo nharaunda, mazitombo echando, guru nemapopoma, uye nemakoronga kunoshamisa.
All of nzvimbo dzokuona dzakanaka inoonekwa kuburikidza neiyo Express chitima nerupo vista windows mune yega mota yevanofamba. Rwendo kuchizoguma pa Bernina Pass. pa 7,000 tsoka pamusoro pegungwa, kuti vanopfuura asingatani kwehasha snowstorms. Zvichakadaro, jeka Italy yakakumirira pane mumwe mugumo rwendo urwu. This yevedza chitima tasva inofanirwa kuve yekumanikidza pane ese echitima anodisa emabhakiti runyorwa.
Zvichakadaro, kubatana Express pamusoro pamazita ndiye db kana Deutsche rautateiden. Germany National chitima Network inopa mamwe yevedza anokwira pedyo River Rhine. nzira dzayo achakutora kuburikidza achirova pfungwa Alps uye gomo nokumipata. Semuyenzaniso, yakanakisisa nzira kunzwisisa Europe kuti chakarebesa rwizi riri nomukombiyuta nzira unobatanidza maguta wokuMainz uye Cologne. Izvi nzira anotora iwe kuburikidza zvinyoronyoro zvikomo, Crumbling nematende, uye yakabatana yemizambiringa.
Db inopa dzose chitima anokwira kuti Connect maguta akaita Amsterdam, Copenhagen, uye Prague kuna Germany mikuru metropolises. Akafanana Bernina Express, zviri tarenda nzira kuona Europe kuti ruzhinji. Hazvishamisi kuti CNN zvinoreva Deutsche rautateiden sezvo "Ndeimwe inofadza German zvakaitika pakufamba kuti murege inosanganisira Mercedes-Benz 450. " Nepo nezvitima Europe dziri kunyanya inoremekedzwa nokuda refu muchinjikwa-nyika uye muchinjikwa kondinendi nzendo, pane dzimwe mapfupi nzira mamwe kweimwewo chitima vafambi. Semuyenzaniso, ari Berlin Ringbahn agara akakurumbira pakati vashanyi vanoda nyore dzinoyevedza vachiratidzwa guta. Unogona kuedza izvi kuti mutengo tikiti chete.
Hanover kuna Cologne Zvitima
No kungotaura zvinonakidza chitima nzendo kwaizova kwakakwana pasina kusanganisira Trans-Siberian Express. Uyewo sevatsigiri chakarebesa chitima rwendo panyika, ari Trans-Siberian Express richibatanidza Moscow kumadokero Russia kuti mumhenderekedzo yegungwa kuguta Vladivostok muna Eastern Russian. Munziramo, matavi enjanji kunze kuenda pedyo nyika dzakaita seChina, Mongoriya, uye North Korea. Nzvimbo dzakawanda Western Europe, kusanganisira Amsterdam, vane chitima dzemapurisa kuti chipo anokwira kuti Trans-Siberian Station St. Petersburg, Rashiya. Ndosaka vokuEurope vakawanda vanosarudza kutora chitima kana kupindawo namo mabvazuva.
Vatariri kumativi Russia nechitima ndechimwe yakachipa pashiri nzira kufamba. Ichokwadi, zviri zvakare rimwe slowest, pamwe Ladbrokes vachiti kuti husiku akarara chitima kubva Volgograd kuna Nizhny Novgorod anotora 27 maawa. Still, ReRussia zvakawanda njanji maitiro akaona yakawanda chiito gore rino apo nyika vaipinda World Cup. Fans Vazhinji paakaona zvakawanda munyika uye vanhu vayo pavaifamba kuti Fixtures nechitima.
Ichi chimwe chinonakidza uye chinowanzo kufuratirwa njanji pakufamba. zvechokwadi, hapana akaita vanhu uye zvakaitika uchaita nazvo munzira. Zvigadzirei kusongana mamwe anonakidza vanhu vanobva pasi pose. Hazvinei muchinjikwa-nyika nechitima rwendo uri, zvichida kuti anopedzisira kuwana shamwari kana mbiri pakati vamwe vafambi neusiku uchiri. Ungave uri kutora yevedza Bernina Express, kubvongodza nyika dzinoverengeka pamusoro kana kuti Deutsche rautateiden kana Trans-Siberian Express, kana vakazorora nomusi kuSwitzerland Glacier Express, izvo The Culture Trip anotsanangurwa rwendo vorongerwa ari rainzwika Bernina, kuenda nechitima wakasungwa kuva chimwe chezvinhu zvinonakidza muupenyu hwako.
Kuti uwane yakanakisa chitima ruzivo muhupenyu hwako, pamitengo yakachipa, uye kutorerwa obnoxious Réservation yechikoro, shandisa Save A Train!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffascinating-train-travel-europe%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / of kuti kana / uye mitauro / ja zvakawanda.
Ndiri blogga yakavanzika, rudo zvitima & famba, kana uine imwe nguva yekusara ndingade kana ukataura pane zvandatumira, nekuti zvakakosha kwandiri kuti ndiwane mhinduro kubva kune vaverengi vangu, nakidzwa. - Unogona baya pano ndibate
Chitima Kufamba China, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Russia, Travel Europe, Kufamba U.S.A.